Sebenzisa i-New Jersey Bankruptcy Attorney ukukusiza ukuthi ufake amafayela ngokuqothuka ukuze ubone ukuthi kungani kunesilinganiso sempumelelo se-95% se-Chapter 7 Bankruptsets - NJ & NY Real Estate, Probate, Foreclosure Defense and Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Blog / Ukuqothuka / Sebenzisa i-New Jersey Bankruptcy Attorney yokukusiza ukuthi ufake amafayela ngokuqothuka ukuze ubone ukuthi kungani kunesilinganiso sempumelelo se-95% seSahluko se-7 Bankruptiture
July 8, 2017 Ukuqothuka, Ukuqothuka kweNew Jersey, Ukuvikelwa Kwemboni YeNew YorkShiya amazwanaUDerek Soltis
Uma ucabanga ngokugcwalisela izinkulumo zokuqothuka ngeNew J ersey Bankruptcy Attorney mahhala.
Izikhathi eziningi abantu banezinkinga futhi bacabanga ukuthi ukuqothuka kungaba ukuphela kwempendulo yabo. Khuluma nomunye wethu NJ Ukuqothuka abameli for Mahhala ngaphambi kokufaka. Sinamahhovisi eJersey City naseNew York. Futhi singaphendula imibuzo yakho eminingi ngocingo osishayela kulo I-844-533-3367 okuyi (844) 5- DEFENSE. Silapha ukukusiza ukuvikela amalungelo akho.
Uma ufuna ukuzama ukufaka a Isahluko 13 ukuqothuka ngokwakho, Inkantolo Yokunqothuka KwaseNew Jersey inomhlahlandlela wokusetshenziswa kwezikweletu. Ngaphambi kokuzama, qonda ukuthi cishe i-1 kuma-3 Bankruptsets ayaphumelela ngokusho kwe Isikhungo Sokuqothuka KwaseMelika. Leli zinga lempumelelo le-33% libonakala lihluke kakhulu kokulingene Izinga lokuphumelela le-95% lokuqothuka kweSahluko 7 efayilwayo.
Umehluko phakathi kwesilinganiso se-33% sokuphumelela kweSahluko 13 Bankruptsets kanye ne-95% izinga lokuphumelela kweSahluko 7 Bankruptsets kulula ukuchaza….
Umehluko phakathi kwesilinganiso se-33% sePhumelele seSahluko se-13 Bankruptsets kanye ne-95% izinga lokuphumelela kweSahluko 7 Bankruptsets kulula ukuwuchaza lapho ubunzima besahluko 13 sokuchithwa kwemali kwezimali kanye nezisusa zokugcwalisa izahluko 13 kuqhathaniswa nokufaka isahluko 7 yile ihlolwe. Kwezinye izimo ukufakwa kwebhange kweSahluko 7 ukuqothuka kungahambelana ngqo nalokho umuntu okufayo azama ukukufeza.
Ake sibheke isibonelo ukubona ukuthi isahluko 7 singamlimaza kanjani umuntu. Ithi abantu ababili banemizi ye-3 futhi bangena ngemuva kwenye yezindlu zabo eziqashisayo, kodwa okwangoku bahlala endaweni yokuqala nenye impahla. Uma benokulingana ezindlini zabo eziyinhloko, kodwa bengelutho kwezindlu zabo eziqashiwe futhi bamemezela ukuqothuka kweSahluko 7, izindlu ezinobuhlakani zingadonswa ebhange elizothengiswa ukumboza izikweletu zeminye imizi. Lesi ngesinye sezizathu esenza abanye abantu bafake izakhiwo zabo kuma-LLC ukuvikela ukutshalwa kwezimali kwabo uma kungenzeka enye imali itshaliwe.
Kulesi simo esingenhla, kungenzeka ukuthi abantu bavele kahle kakhulu ekugcwaliseni ukuqothuka kweSahluko 13. Manje uma sicabanga ngezinga le-33% lokuphumelela, kufanele sibheke ukuthi yini ngempela eyenza a impumelelo ekuqothulweni kwemali. Izikhathi eziningi amaklayenti eza kule femu yethu ngoba ikhaya lawo selizothengiswa lapho kuthengiswa abaseshi. Ngemuva kwalokho sizofaka ukuqothuka kweSahluko 13 ukumisa ukuthengiswa kwe-sheriff uma benemali yokwenza uhlelo lokukhokha lokonga impahla yabo. Ukugcwaliswa kokuqothuka kuzomisa ukuthengiswa kosherifu eNew Jersey. Ukugcwaliswa kwe a Isahluko 7 noma iSahluko 13 ukuqothuka kuzokuma NJ ukuthengiswa kosherifu. Lapho ukuqothuka sekufakiwe, sabe sesazisa umnyango wezabasebenzi ukuthi siqinisekise ukuthi impahla iyakhishwa ekuthengisweni kothimba.
Lapho ukuqothuka kufakwe ebhange lokuqothuka kweSahluko 13, sivame ukucela ukuncishiswa kokulahlekelwa kanye nombolekisi ukuze ahlele ukuthi akhokhe imali ayikweletayo noma ahlele nesikhathi sokuthengisa ikhaya. Kwezinye izimo, abantu bakhetha ukukhokha zonke izikweletu zabo isikhathi esingange 3 noma i-5 futhi bagweme ukulahleka kokuncishiswa nombolekisi wabo. Lapho beqeda ukukhokha ngaphezulu konyaka we-3 kuya esikhathini se-5 ukuqothuka kuzothathwa njengempumelelo. Uma ukuncishiswa kokulahlekelwa kuhlelwe ngebhange, khona-ke izikhathi eziningi ukuqothuka kuqedwa bese kuxoshwa. Noma umuntu ofake isicelo ekutholile kanye lokho abebekufuna (Balondoloze ikhaya labo, futhi kuyicebo elisha lokukhokha noma bathola isikhathi sokuthengisa ikhaya labo) ukuqothuka kubhalwe njengokuxoshwa futhi kungagcwaliswa ngempumelelo.
Ngakho-ke kwesinye isikhathi ukwehluleka kwesahluko 13 empeleni kuyimpumelelo.
Ngenxa yalokhu kubenzima, sinikeza abantu ukubonisana kwamahhala kwezomthetho ngaphambi kokuthi ubabhalise ukuze bavule ifayili lokuqothuka. Empeleni sidinga ukuthi abantu basitshele izisusa zabo zokugcwalisa ukuqothuka ngaphambi kokuthi sisebenzisane nabo. Kwesinye isikhathi abantu akudingeki ukuthi bafake ukuqothuka, futhi sifuna ukuqiniseka ukuthi abantu baqonda zonke izinketho zabo ngaphambi kokufaka. Kwesinye isikhathi isixazululo sisobala futhi siyingxoxo emfushane kakhulu. Njengokuthi ngine- $ 200,000 esikweletini sezokwelapha futhi ngenza kuphela i- $ 50,000 ngonyaka futhi angabi nayo impahla. Kulokhu kufayelwa ukuqothuka kweSahluko 7 kubonakala kusobala.
Sizoncoma kuphela izinketho zakho ezikusebenzela. Uma udinga isikhathi, singakuthola isikhathi esithe xaxa sokulwela ukonga ikhaya lakho. Uma udinga ukuphuma ngaphansi kwamakhadi wesikweletu awusakwazi ukukhokha singasiza. Uma uhlaselwe yingozi eshintsha impilo futhi ungasakwazi ukukhokhela imalimboleko yakho yabafundi, ungakwazi nokubenza ukuthi badedelwe ngenxa yokuqothuka.
Uma ubhekene nezikhathi ezinzima, kubalulekile ukukhuluma nommeli ongakusiza uqonde izinketho zakho ngalesi sikhathi esibucayi. Xhumana nathi namuhla, futhi sizodlula konke ongakhetha kukho. Sithinte ku (844) 5 - DEFENSE - (844) 533-3367 noma usithumele i-imeyili ku [Email protected]
Uma ufuna ukuthatha isifundo sokwelulekwa ngesikweletu ngaphambi kokuqothuka, sincoma kumakhasimende ethu ukuthi asebenzise Ukwelulekwa Kwezikweletu Okuphuthumayo. Njengengxenye yezimali esizokhokhisa zona, sifaka lezi zifundo ezimbili njengengxenye yesamba esikhokhayo.
Kwisifundo sesibili sibacela ukuthi basebenzise iSolidStart:
Ummeli waseJersey Foreclosure uzophenya ngokweqiniso Ngokwezezimali yakho nempahla
Ukuqonda ukuthi yini eku-Hudson County New Jersey Kuhlelwe iSheriff yokuthengisa